ဆီးချိုရောဂါရှင် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဗိန္ဒောဆရာ တရားစွဲခံရ - Yangon Media Group
ဆီးချိုရောဂါရှင် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဗိန္ဒောဆရာ တရားစွဲခံရ
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ မတ် ၈
ဆီးချိုရောဂါရှင် အသက်(၁၃) နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ဦး သေဆုံးရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အင်ဆူလင်မထိုးဘဲ တိုင်းရင်းဆေးအဆီများဖြင့်ကုသခဲ့သော ဗိန္ဒောဆရာကို အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက အမှုဖွင့်တရားစွဲလိုက်ကြောင်း မတ် ၈ ရက် AP သတင်းကဆိုသည်။ တီမိုသီမောရိုး(၈၃)နှစ်ကို လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆေးဝါးကုသမှု၊ ကလေးငယ်သေဆုံးစေမှုတို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း လော့စ်အိန် ဂျလိစ်အစိုးရရှေ့နေရုံးက ဆိုသည်။ မောရိုးကမူ ထိုစွပ်စွဲချက်များကို လက်မခံဟု ၎င်း၏ရှေ့နေက ပြောသည်။
ဘုရားသခင်၏ နည်းပေးလမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ မိမိ၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို သဘာဝတိုင်းရင်း ဆေးများဖြင့် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ခဲ့သည်ဟု မောရိုးက ၎င်း၏အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားကြောင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ သည် ကောင်လေးကို တိုင်းရင်း ဆေးများဖြင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ကုသပေးခဲ့ကြောင်း အစိုးရ ရှေ့နေ မိုက်ဖူးဝါးက ပြောသည်။
ထိုကောင်လေးသည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရောဂါဆိုးရွားလာခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မောရိုးသည် အင်ဆူလင်မသုံးဘဲ တိုင်းရင်းဆေးများသာသုံးရန် မိဘများ ကိုပြောခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကောင်လေးသည် သင့်လျော်သောဆေးဝါး ကုသမှုရရှိခဲ့ပါက အသက်ဆုံးရှုံးရ မည်မဟုတ်ဟု ဆရာဝန်များက ကောက်ချက်ချထားကြောင်း မိုက်ကယ်ဖူးဝါးက ပြောသည်။
ထိုကောင်လေးသည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ထဲတွင်သေဆုံးခဲ့သော်လည်း မိဘများက တရားမစွဲခဲ့ပါ။ အာဏာပိုင်များကလည်း မောရိုးကို အရေးမယူခဲ့ပါ။ ယခုလို သုံးနှစ်ခန့်ကြာသော အခါမှသာ အာဏာပိုင်များက မောရိုးကို တရားစွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
စည်းကြပ်မှု လွတ်ကင်းငွေများကို အခွန်သက်သာခွင့် ပေးရာတွင် ပြည်ပမှ ငွေမည်းများကို သတိပြုရန် ??
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအနေဖြင့် ၂ဝ၁ -၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘတ်ဂျက်ကို လမ်းတံတားတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင်
ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်တွင် အင်္ဂလိပ်ခေတ်နှင့် ခေတ်သစ်ပုံစံ ပေါင်းစပ် ပုံဖော် တည်ဆောက်ထားသော နာ?
ချဲလ်ဆီးနည်းပြ ရာထူးမှ ကွန်တီနုတ်ထွက်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း ဗီယာလီ ထုတ်ဖော်ပြောဆို
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
၁ဝ နှစ်အတွင်း ဆူဇူကီးဖလားကို ပြန်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်
စားအုန်းဆီ ထုတ်ကုန်များကို ပယ်ဖျက်သဖြင့် အီးယူအဖွဲ့အား အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှားနိုင်င?